Guyyaan Yaadannoo FDG wagga 11ffaa Adelaide keessatti kabajame – Oromedia
Home » Uncategorized » Guyyaan Yaadannoo FDG wagga 11ffaa Adelaide keessatti kabajame
(Oromedia, 27 Sadaasa 2016) Guyyaan yaadannoo FDG waggaa 11ffaa South Australia magaalaa Adelaide keessatti bakka miseensoti fi deeggartooti ABO fi hawaasti Oromoo Austiraaliyaa kibbaa argamanitti gaafa Sadaasa 26/11/2016 sirna hoo’aan kabajamee oolee jira.
Ayyaanni kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddoon eegalame; maanguddoonnis akka sabni Oromoo tokkoomu, akka walta’uufi waldhagahu eebba isaanii keessatti ibsanii jiran.. Achiin, faaruun Alaabaa Oromiyaa faarfamuun sagantaan Ayyaana Goototaaa jalqabame.
Barreysaan Hawaasa Oromoo Austiraaliyaa Kibbaa, Jaal Said Ibraahim namoota achitti argaman baga nagaan dhufatan jechuun simatan. Keesattu keessumoota dhalootaan Oromoo hin tahin waamicha keenya gabajanii achirratti argamani Oromo cinaa dhaabatan simannaan addaa godhamteef.
Hawaasti Oromoos bakka jirrutti walqabatee, tokkummaan akka waliin jiraatu, dhibdee isaas akka waliin hiikkatu dhaamaniin booda Ayyanichi akka sirnaan banamu tasisanii jiran
Itti aansuudhaan, wareegamtoota walii galatti kan fincila Oromoo keessatti wareegama kaffalan ittiin yaadachuu fi muldhata ifa fuulduree QBO akeeku dungoon dhaloota haaraan qabsiifamee jira.
Dura Taa’aan jaarmiyaa ABO Konyaa Adelaide, Jaal Ahmad Abdurahiman, gama isaatiinis, ayyaana kana irratti haala Oromiyaafi Oromoon keessattu yeroo ammaa itti jiru ilaalchisee ibsa kennee jira.
Ibsa kenne keessattis, mootummaan Wayyaanee karaa hundaan qabeenya Oromiyaa saamaa akka jirtu, mirga ummata Oromoos hedduu miidhaa akka jirtu, barattootaa fi ummata Oromo kumaatamaan lakkawaman ajjeesuu fi kumaatama dhibbaan laakkaawaman mana hidhaatti jumlaan akka guraa jirtuu fi kaanis miidhaa fi dararama honga hin qabne yeroo ammaa irratti raawataa jirtu kana furuufis ummati keenya gama hundaan wal ijaaranii tokkumaan diina isaanii irratti bobba’uu akka qaban dhaame.
Itti dabaluudhaan, diina nama nyaataa Wayyaanee kana hundeen ofirraa buqqaasuudhaaf furmaani tokkichaan Oromoon qabdu qabsoo adda durummaa ABOn geggeefamtu qofa jalatti hiriirtee WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo qofa akka tahe ibsee jira,
Hawaastis gama isaaniitiin miidhaa ummataa Oromoo irra gahaa jiru kan balaaleffatan yoo ta’u, gama hundaan walijaaranii akka miidhaa san buqqisuu irratti hojjatan waliif dhaamanii jiru. Ayyaana kana irratti Miseensotaa, Deeggaraa ABO fi hawaasni Oromoo Konyaa Adelaide, deeggarsaa fi gumaacha WBO fi Qeerroof godhanii jiran.
Dhumarratti, imaanaa gootota sabboontoota Qeerroo kufanii gaafii ummata Oromoo, gaafii mirga abbaa biyyummaa dhiiga isaanii irratti gadi naqan, lafee isaanii irratti caban galamaan gahuuf waadaa Haaromsani jiran.
Previous: Gaazexeessaan Oromoo Dhabame
Next: Gada system inscribed on UNESCO’s list of Intangible Cultural Heritage